CXD Oo Deegaano la wareegay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta CXD Oo Deegaano la wareegay
CXD Oo Deegaano la wareegay
Howgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa Ciidanka Xoogga Dalka ka sameeyeen deegaanno ka tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana ujeedkiisu lagu sheegay xaqiijinta Amniga iyo ka hortagga weerrarada Al-Shabaab ay ka fuliyan degaannada Gobolkaas.
Howlgalka oo ay si wada jir ah u sameeyeen Ururka 4-aad Guutada 16-aad Kumaandooska Xoogga DANAB iyo Ururka 64-aad Guutada 7-aad Qeybta 60-aad Xoogga Dalka ayaa waxay si gaar ah uga fuliyeen degaanno ay ka mid yihiin Yaqdhuubo, Dibilay, Bocoray, Hakow Balow Warta Macalin Shabax, Bay nanay, & Caliyow Baarow, oo katirsan Gobolka Shabeelaha Hoose.
Intii Howlgalka uu socday saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa u kuurgalay xaaladda nololeed ee haysta dadka deegaannada ay Howlgalka ka sameeyen ciidamada ku sugan.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysa ayaa u sheegay Warbaahinta dowladda in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa degaannada Gobolka Shabeellaha Hoose laga saarayo Al-Shabaab.
Howlgalka Ciidamada dowladda ay ka sameeyeen Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli todobaadyadii la soo dhaafay ay Ciidamada howlgalkaan oo kale ay ka wadeen degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe.